श्रीमद्भगवद् गीतमा अनेक प्रकारका योग पद्धति बताइएको छ । भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग । योग शब्दको अर्थ हुन्छ जोड्नु । यसको अर्थ हो कि कसरी हामी ईश्वरसँग जोडिने । यो ईश्वरसँग पुन जोडिने या सम्बन्ध बनाउने साधन हो । कालक्रममा श्रीकृष्णद्वारा दिएको यो योग लुप्त भएको थियो । तर यस्तो किन भयो ?
के जुन समय श्रीकृष्ण अर्जुनसँग श्री गीता भनिरहनु भएको थियो त्यस समय विद्वान साधु थिएनन् ? थिए । त्यस समय अनेक साधु सन्त थिए । के त्यस समय विद्वान थिएनन्, विद्वान पनि थिए ।
श्रीकृष्ण यही कुरालाई बल दिइरहनु भएको थियो । कोही व्यक्ति दुनियावादी दृष्टिमा राम्रो विद्वान हुनसक्छ तर यतिले मात्र उ भगवद् गीता बारे टीका लेख्न योग्य हुँदैन । गीतलाई बुझ्नका लागि शिष्य परम्परालाई मान्न आवश्यक छ । हामीलाई भगवद् गीताको आत्ममा प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ न कि पाण्डित्यको दृष्टिले हेर्नुमात्र ।
श्री कृष्णले सबै विद्वाहरुलाई छोडेर अर्जुनलाई नै सुपात्र किन मान्नुभयो ? अर्जुन त्यस्ता कुनै विद्वान थिएनन् न योगी न ध्यानी । उनी त युद्धमा लड्नका लागि शूरवीर थिए । त्यस समय अनेक महान ऋषि जीवित थिए र श्रीकृष्णले चाहेको भए भगवद् गीताको ज्ञान प्रदान गर्न सक्नुहुन्थ्यो ।
यसको उत्तर यही हो कि सामान्य व्यक्ति भए पनि अर्जुनको सबैभन्दा ठूलो विशेषता थियो, ‘भक्तो sसि मे सखा चेति’ तिमी मेरो भक्त तथा साथी हौं ।
यही अर्जुनको अतिरिक्त विशेषता थियो जो ठूला ठूला साधुमा थिएन । अर्जुनलाई थाहा थियो कि कृष्ण भगवान हुनुहुन्छ । अतः उनी कृष्णलाई गुरु मानेर समर्पित भएका थिए ।
भगवान श्रीकृष्णको भक्त बनेविना कोही व्यक्ति भगवद् गीतालाई बुझ्न सक्दैन थियो । उसले त गीताबाट संस्तुत विधिले बुझ्न आवश्यक थियो जसरी अर्जुनले बुझेका थिए ।
यदी हामीले यसलाई भिन्न प्रकारले बुझ्न चाहन्छौ या यसको भिन्न व्याख्या गर्न चाहन्छौ भने त्यहो हाम्रो पाण्डित्य प्रदर्शन हुनसक्छ भगवद् गीता होइन ।
गौरवपूर्ण विगतलाई सम्मान गर्दै सम्बद्ध धरोहरको संरक्ष...
यी तीन चिज प्राप्त गर्न हदैसम्म पनि तयार हुनुपर्छ : ...
राष्ट्रपति भण्डारीले जलेश्वरनाथ महादेव मन्दिरको गुफा...